Zaw Hein, Author at Shwe Khit - Page 406 of 413
ထနျးရေ ထနျးသီးနဲ့ ကနျြးမာရေး မသိသူကြျောသှား သိသူဖျောစား
May 22, 2020 by Zaw Hein
ထနျးသီး/ထနျးရညျ/အညာထနျးသီးခြဥျဟငျးဟာ ကနျြးမာရေးကိုအထူးကောငျးမှနျစပေါတယျ။ဒါ့ပွငျ အညာဒသေက ထနျးသီးဆံဟငျး ဟာလညျး စားလို့ အတျောကောငျးပါတယျ
ထနျးပငျတဈပငျလုံးတှငျ ဘဘာဝအလြောကျ ပဉ်စဘူတဓာတျငါးပါးစုပေါငျးနတောကွောငျ့ ထနျးပငျတဈပငျမှ ထှကျသော အစိတျအပိုငျးမြားအားလုံး မတူညီသောကနျြးမာရေး အကြိုးကြေးဇူးအာနိသငျမြားစှာ ရှိကွပါတယျ။
၁။ ထနျးဖိုပှငျ့က ခြောငျးဆိုးသလိပျထခွငျးနှငျ့ အစာမကွရေောဂါတို့ ကိုနိုငျပါတယျ။
၂။ ထနျးသီးစိမျးက အေး၍ခြိုဖနျသော အရသာရှိပွီး စိမျ့တိမျ့တိမျ့အရသာလေးနဲ့ အသီးနုလြှငျ အစာ ကွလှေယျပွီး အသီးရငျ့ပါက အစာကွညေကျဖို့ ခကျပါတယျ။ လကေိုခြုပျစတေယျ။ အနညျးငယျ လေးမူးယဈစတေယျ။ဆီး၊ ဝမျး ကိုရှငျစပေါတယျ။ပနျးနာ၊ သှေးအနျ၊ သှေးကရြောဂါမြား ပြောကျကငျးစနေိုငျပါတယျ။ထနျးသီးမှညျ့က လူကိုအား ဖွဈစပွေီး ဝဖွိုးစပေါတယျ၊ သုတျကိုပှားစတေဲ့အတှကျ ကလေးရရငျခကျခဲနသေောအိမျထောငျရှငျ အမြိုးသားမြား အတှကျအထူးသငျ့လြျောပါတယျ။
၃။ ထနျးရညျခြိုခြိုသောကျသုံးပါကလညျး လနှေငျ့သညျးခွကေိုနိုငျပွီး ဆီးရှငျစတေယျ၊ ဆီးအိမျကို သနျ့ရှငျးစေ ပွီး ရဖေဉျြးရောဂါအတှကျလညျးကောငျးပါတယျ။အိပျပြျောစပွေီး မူးဝဝေခေံစားမှုရရှိနျိုငျပါတယျ။ ဆီးပူ၊ ဆီး အောငျ့၊ ဆီးနညျးရောဂါမြားအတှကျ လတျလတျဆတျဆတျထနျးရညျကို သကွားထညျ့၍ သောကျပါက အထူး ကောငျးမှနျပါတယျ။
၄။ ထနျးရညျခဉျြ/ ထနျးရညျခါးက ခန်ဓာကိုယျတခုလုံးပြံ့နှံ့စသေညျ့အပွငျ သညျးခွကေိုအပူရှိနျမြားစတေတျပွီး သှေးကွှကာ ပို၍မူးဝစေတေတျပါတယျ။ ခံတှငျးရှငျးပွီး နှုတျသှကျစပေါတယျ။လနေိုငျ၍ အစာကွစေပေါတယျ။ ဆီးအောငျ့၊ ဆီးပူရောဂါရှိသူမြား သှေးလေး၊သှေးတတျ၊ အိပျမပြျောတတျသောရောဂါမြားအတှကျ အထူးသငျ့ လြျောပါတယျ။
ရုက်ခဗဒေအမညျ borassusflabellifer Linn ဟုအမညျရတဲ့ ထနျးပငျကိုအင်ျဂလိပျလို Palmyra palm ဟုချေါပွီး မှနျနဲ့ရှမျးတိုငျးရငျးသားဘာသာစကားအရ Tan လို့ချေါပါတယျ။ထနျးပငျမြားကိုနရောဒသေမရှေး မွအေမြိုးအ စားမရှေး စိုကျပြိုးနိုငျပွီး အပူပိုငျးဒသေမြားတှငျ ပိုမိုစိုကျပြိုးကွပါတယျ။
ထနျးပငျဟာ အဖိုပငျနှငျ့အမပငျဟူ၍ နှဈမြိုးရှိပွီး ၎င်းငျးအပငျနှဈမြိုးစလုံးမှ ထနျးရညျထှကျရှိပါတယျ။အမပငျမြားမှ သီးသောထနျးသီးမြားကိုသာ မြိုးအဖွဈရယူစိုကျပြိုးနိုငျပါတယျ။ခုနဈနှဈသားအရှယျ ထနျးအဖိုပငျမြားမှ ထနျးနို့ ခိုငျမြားထှကျရှိပွီး အဲ့ဒီကနထေနျးရညျရရှိပါတယျ။ ထနျးအမပငျမြားဟာ ၁၀ နှဈသားတှငျ ထနျးသီးမြားထှကျရှိ လာပွီး ထိုအသီး၏အညှာမှ ထနျးရညျထှကျရှိပါတယျ။
ထန်းသီး/ထန်းရည်/အညာထန်းသီးချဉ်ဟင်းဟာ ကျန်းမာရေးကိုအထူးကောင်းမွန်စေပါတယ်။ဒါ့ပြင် အညာဒေသက ထန်းသီးဆံဟင်း ဟာလည်း စားလို့ အတော်ကောင်းပါတယ်
ထန်းပင်တစ်ပင်လုံးတွင် ဘဘာဝအလျောက် ပဉ္စဘူတဓာတ်ငါးပါးစုပေါင်းနေတာကြောင့် ထန်းပင်တစ်ပင်မှ ထွက်သော အစိတ်အပိုင်းများအားလုံး မတူညီသောကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးအာနိသင်များစွာ ရှိကြပါတယ်။
၁။ ထန်းဖိုပွင့်က ချောင်းဆိုးသလိပ်ထခြင်းနှင့် အစာမကြေရောဂါတို့ ကိုနိုင်ပါတယ်။
၂။ ထန်းသီးစိမ်းက အေး၍ချိုဖန်သော အရသာရှိပြီး စိမ့်တိမ့်တိမ့်အရသာလေးနဲ့ အသီးနုလျှင် အစာ ကြေလွယ်ပြီး အသီးရင့်ပါက အစာကြေညက်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ လေကိုချုပ်စေတယ်။ အနည်းငယ် လေးမူးယစ်စေတယ်။ဆီး၊ ဝမ်း ကိုရွှင်စေပါတယ်။ပန်းနာ၊ သွေးအန်၊ သွေးကျရောဂါများ ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ထန်းသီးမှည့်က လူကိုအား ဖြစ်စေပြီး ဝဖြိုးစေပါတယ်၊ သုတ်ကိုပွားစေတဲ့အတွက် ကလေးရရင်ခက်ခဲနေသောအိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသားများ အတွက်အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။
၃။ ထန်းရည်ချိုချိုသောက်သုံးပါကလည်း လေနှင့်သည်းခြေကိုနိုင်ပြီး ဆီးရွှင်စေတယ်၊ ဆီးအိမ်ကို သန့်ရှင်းစေ ပြီး ရေဖျဉ်းရောဂါအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်။အိပ်ပျော်စေပြီး မူးဝေဝေခံစားမှုရရှိန်ိုင်ပါတယ်။ ဆီးပူ၊ ဆီး အောင့်၊ ဆီးနည်းရောဂါများအတွက် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ထန်းရည်ကို သကြားထည့်၍ သောက်ပါက အထူး ကောင်းမွန်ပါတယ်။
၄။ ထန်းရည်ချဉ်/ ထန်းရည်ခါးက ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးပျံ့နှံ့စေသည့်အပြင် သည်းခြေကိုအပူရှိန်များစေတတ်ပြီး သွေးကြွကာ ပို၍မူးဝေစေတတ်ပါတယ်။ ခံတွင်းရှင်းပြီး နှုတ်သွက်စေပါတယ်။လေနိုင်၍ အစာကြေစေပါတယ်။ ဆီးအောင့်၊ ဆီးပူရောဂါရှိသူများ သွေးလေး၊သွေးတတ်၊ အိပ်မပျော်တတ်သောရောဂါများအတွက် အထူးသင့် လျော်ပါတယ်။
ရုက္ခဗေဒအမည် borassusflabellifer Linn ဟုအမည်ရတဲ့ ထန်းပင်ကိုအင်္ဂလိပ်လို Palmyra palm ဟုခေါ်ပြီး မွန်နဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားအရ Tan လို့ခေါ်ပါတယ်။ထန်းပင်များကိုနေရာဒေသမရွေး မြေအမျိုးအ စားမရွေး စိုက်ပျိုးနိုင်ပြီး အပူပိုင်းဒေသများတွင် ပိုမိုစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။
ထန်းပင်ဟာ အဖိုပင်နှင့်အမပင်ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပြီး ၎င်းအပင်နှစ်မျိုးစလုံးမှ ထန်းရည်ထွက်ရှိပါတယ်။အမပင်များမှ သီးသောထန်းသီးများကိုသာ မျိုးအဖြစ်ရယူစိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။ခုနစ်နှစ်သားအရွယ် ထန်းအဖိုပင်များမှ ထန်းနို့ ခိုင်များထွက်ရှိပြီး အဲ့ဒီကနေထန်းရည်ရရှိပါတယ်။ ထန်းအမပင်များဟာ ၁၀ နှစ်သားတွင် ထန်းသီးများထွက်ရှိ လာပြီး ထိုအသီး၏အညှာမှ ထန်းရည်ထွက်ရှိပါတယ်။
လူကွိုကျမြားတဲ့ စိနျ တလုံး သရကျ
စိနျတလုံးကတော့ လူကွိုကျ အမြားဆုံးပါ။သရကျသီးခဈြသူတှေ အတှကျ သရကျသီးက ပေးတဲ့ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူး တှကေို ဖျောပွ ပေးခငျြပါတယျ။
(၁)ကငျဆာရောဂါဖွဈပှားနိုငျခကြေို လြှော့ ခပြေးနိုငျ
သရကျသီးမှာဆိုရငျ antioxidants တှေ အမြားကွီး ပါဝငျပါတယျ။သရကျသီးမှာဆိုရငျ ပါတဲ့ antioxidants တှကေ ကငျဆာ ဖွဈပှားနိုငျခြေ ကို လြှော့ ခပြေးနိုငျပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ အူမကွီးကငျဆာ နဲ့ ရငျ သား ကငျဆာ ဖွဈပှား နိုငျခြေ ကို လြှော့ ခြ ပေးနိုငျပါတယျ။သူ့မှာဆိုရငျ Beta carotene ဆိုတဲ့ antioxidant ပါဝငျ ပါတယျ။အဲ့ဒီ အရာ က ရငျသားကငျဆာ၊အူမကွီးကငျဆာနဲ့ သှေးကငျဆာ ရောဂါ ဖွဈပှားနိုငျခြေ တှကေို လြှော့ ခြ ပေးနိုငျပါတယျ။
သရကျသီးမှာဆိုရငျတော့ Vitamin-A ၊ Beta carotene ၊α-carotene, β-cryptoxanthin ဆိုတဲ့ ကနျြးမာ ရေး အတှကျ အထောကျအကူဖွဈစတေဲ့ အရာတှေ အမြားကွီး ပါဝငျပါတယျ။vitamin-A မကျြလုံး ကနျြးမာရေးနဲ့ အမွငျ အာရုံအတှကျ အရမျးကို ကောငျးတဲ့ အာဟာရဓါတျပါ။သရကျသီးမှာဆိုရငျတော့ Vitamin A ပေါ ကွှ ယျ ၀စှာ ပါဝငျ တာမို့ အမွငျအာရုံ အတှကျ အမြားကွီး အကြိုးကြေးဇူးဖွဈစပေါတယျ။အမွငျအာရုံကောငျးခငျြရငျ သရကျသီး ကို စားပေးပါ။
Vitamin A နဲ့ C တို့ သရကျသီးမှာ ပေါကွှယျဝ စှာ ပါဝငျပါတယျ။အဲ့ဒီဓါတျ တှကေ အရိုး ကနျြးမာ ရေး အတှကျ အရမျးကို ကောငျးပါတယျ။ဒါ့အပွငျ သူ့မှာပါတဲ့ ပရိုတငျးက လညျး အရိုးကနျြးမာရေး အတှကျ အထောကျ အကူ ဖွဈစပေါတယျ။အရိုးကနျြးမာရေးအတှကျ အရေးပါတဲ့ Vitamin A ပါဝငျ နတောမို့ သရကျသီးကို စား ပေးသငျ့ပါတယျ။ သတိပွုရမယျ့ အခကျြတဈခု ရှိပါတယျ။ဘယျအရာကို မဆို အလှနျအကြှံဖွဈရငျ မကောငျးပါဘူး။ အရမျး စားတာမြား လှနျးရငျ vitamin A သိပျမြားရငျ လညျး အရိုးကို ထိခိုကျပကျြစီးစပေါတယျ။အလှနျအကြှံ့ တော့ မစားပါနဲ့။
သရကျသီးမှာ ဦးနှောကျဥာဏျရညျ ဖှံ့ ဖွိုးစတေဲ့ အစှမျးသတ်တိလညျး ပါရှိပါတယျ။သူ့မှာပါတဲ့ Vitamin B6 က ဦးနှောကျဥာဏျရညျဖှံ့ဖွိုးမှုကို အမြားကွီး အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။လူတဈယောကျမှာ Vitamin B6 လုံ လုံ လောကျ လောကျမရဘူးဆိုရငျတော့ သိမွငျနိုငျတဲ့ စှမျးရညျလညျး နညျးပါး လြှော့ ကတြတျပါတယျ။Vitamin B6 ကတော့ ပနျးနာနဲ့ အမြိုးသမီးတှေ ရာသီမလာခငခံစားရတဲ့ ဝဒေနာတှကေို သကျသာပြောကျကငျးစတေဲ့ အစှမျးလညျး ရှိပါတယျ။
(၅)အရှယျမတိုငျခငျ အိုမငျးရငျ့ရျောခွငျးကို သကျသာစေ
သရကျသီးကို အလှအပ အတှကျလညျး စားပေးသငျ့ပါတယျ။သရကျသီးမှာဆိုရငျ ကိုလကျစထရော ပါဝငျမှုက မရှိသလောကျ ကို နညျးပါးပါတယျ။သရကျသီးမှာက အမြှငျဓါတျ၊vitamin C ၊pectin (သရကျသီးမှညျ့ တှငျ ပါတဲ့ သဈသီးယိုတို့ကို ခဲစတေဲ့ သကွားနဲ့ တူတဲ့ဒွပျ)တို့ ပါဝငျပါတယျ။၀ိတျကခြငျြသူတှလေညျး စားပေးသငျ့တယျ။နောကျ တဈခု ကတော့ သူ့မှာပါတဲ့ Collagen က မကျြနှာပျေါမှာ အရေးအကွောငျးတှေ ပျေါတာ ကိုလညျး သကျသာ လြော့ ပါးစပေါတယျ။အရှယျမတိုငျခငျ အိုမငျးရငျ့ရျောမှုကိုလညျး တားဆီးပေးနိုငျပါတယျ။သရကျသီးကို သခှားသီးတို့ လိုပဲ ပေါငျးတငျတဲ့ ပစ်စညျးအဖွဈလညျး သုံးလို့ရပါတယျ။
လူကြိုက်များတဲ့ စိန် တလုံး သရက်
စိန်တလုံးကတော့ လူကြိုက် အများဆုံးပါ။သရက်သီးချစ်သူတွေ အတွက် သရက်သီးက ပေးတဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး တွေကို ဖော်ပြ ပေးချင်ပါတယ်။
(၁)ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို လျှော့ ချပေးနိုင်
သရက်သီးမှာဆိုရင် antioxidants တွေ အများကြီး ပါဝင်ပါတယ်။သရက်သီးမှာဆိုရင် ပါတဲ့ antioxidants တွေက ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ကို လျှော့ ချပေးနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာ နဲ့ ရင် သား ကင်ဆာ ဖြစ်ပွား နိုင်ချေ ကို လျှော့ ချ ပေးနိုင်ပါတယ်။သူ့မှာဆိုရင် Beta carotene ဆိုတဲ့ antioxidant ပါဝင် ပါတယ်။အဲ့ဒီ အရာ က ရင်သားကင်ဆာ၊အူမကြီးကင်ဆာနဲ့ သွေးကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ တွေကို လျှော့ ချ ပေးနိုင်ပါတယ်။
သရက်သီးမှာဆိုရင်တော့ Vitamin-A ၊ Beta carotene ၊α-carotene, β-cryptoxanthin ဆိုတဲ့ ကျန်းမာ ရေး အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေ အများကြီး ပါဝင်ပါတယ်။vitamin-A မျက်လုံး ကျန်းမာရေးနဲ့ အမြင် အာရုံအတွက် အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ အာဟာရဓါတ်ပါ။သရက်သီးမှာဆိုရင်တော့ Vitamin A ပေါ ကြွ ယ် ၀စွာ ပါဝင် တာမို့ အမြင်အာရုံ အတွက် အများကြီး အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်စေပါတယ်။အမြင်အာရုံကောင်းချင်ရင် သရက်သီး ကို စားပေးပါ။
Vitamin A နဲ့ C တို့ သရက်သီးမှာ ပေါကြွယ်ဝ စွာ ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဓါတ် တွေက အရိုး ကျန်းမာ ရေး အတွက် အရမ်းကို ကောင်းပါတယ်။ဒါ့အပြင် သူ့မှာပါတဲ့ ပရိုတင်းက လည်း အရိုးကျန်းမာရေး အတွက် အထောက် အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပါတဲ့ Vitamin A ပါဝင် နေတာမို့ သရက်သီးကို စား ပေးသင့်ပါတယ်။ သတိပြုရမယ့် အချက်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ဘယ်အရာကို မဆို အလွန်အကျွံဖြစ်ရင် မကောင်းပါဘူး။ အရမ်း စားတာများ လွန်းရင် vitamin A သိပ်များရင် လည်း အရိုးကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။အလွန်အကျွံ့ တော့ မစားပါနဲ့။
သရက်သီးမှာ ဦးနှောက်ဥာဏ်ရည် ဖွံ့ ဖြိုးစေတဲ့ အစွမ်းသတ္တိလည်း ပါရှိပါတယ်။သူ့မှာပါတဲ့ Vitamin B6 က ဦးနှောက်ဥာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။လူတစ်ယောက်မှာ Vitamin B6 လုံ လုံ လောက် လောက်မရဘူးဆိုရင်တော့ သိမြင်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်လည်း နည်းပါး လျှော့ ကျတတ်ပါတယ်။Vitamin B6 ကတော့ ပန်းနာနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ရာသီမလာခငခံစားရတဲ့ ဝေဒနာတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ အစွမ်းလည်း ရှိပါတယ်။
(၅)အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို သက်သာစေ
သရက်သီးကို အလှအပ အတွက်လည်း စားပေးသင့်ပါတယ်။သရက်သီးမှာဆိုရင် ကိုလက်စထရော ပါဝင်မှုက မရှိသလောက် ကို နည်းပါးပါတယ်။သရက်သီးမှာက အမျှင်ဓါတ်၊vitamin C ၊pectin (သရက်သီးမှည့် တွင် ပါတဲ့ သစ်သီးယိုတို့ကို ခဲစေတဲ့ သကြားနဲ့ တူတဲ့ဒြပ်)တို့ ပါဝင်ပါတယ်။၀ိတ်ကျချင်သူတွေလည်း စားပေးသင့်တယ်။နောက် တစ်ခု ကတော့ သူ့မှာပါတဲ့ Collagen က မျက်နှာပေါ်မှာ အရေးအကြောင်းတွေ ပေါ်တာ ကိုလည်း သက်သာ လျော့ ပါးစေပါတယ်။အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုလည်း တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။သရက်သီးကို သခွားသီးတို့ လိုပဲ ပေါင်းတင်တဲ့ ပစ္စည်းအဖြစ်လည်း သုံးလို့ရပါတယ်။
ခုလို မိုးတှငျးကာလ ရောကျပီဆိုရငျ တော့…
ခွမေခွသေညျးတှကွေားထဲ သဲဝငျ ရှံရဝေငျ နဲ့ပိုးဝငျပါပီ။
နီရဲ ရောငျကိုငျးညို ပုပျပီး အထိမခံနိုငျလောကျအောငျနာကငျြပါတော့မယျ။
မိုးအေးလေးနဲ့နလေို့ကောငျးပမေဲ့ခွဝေဲရဝေဲစားခွငျးဒဏျကို ခံရတာ အတေျာ့ကို နရေခကျပါတယျ။ဒီလို ဝဒေနာတှေ ဒဏျက ကငျးဝေးဖို့ ဗဟုသုတ အနနေဲ့တငျပွပေးလိုကျပါတယျ ။
ဒီလိမျးဆေးတောငျ့လေး ထညျ့ပေးလိုကျတာနဲ့လုံးဝကိုသကျသာပြောကျကငျးသှားမှာပါ ။ ခွစှေယျ လကျစှယျငုတျတဲ့အခါ ထညျ့ပေးကွညျ့ ပါ …တကယျ့ကို ကောငျးပါတယျ။
ဝယျပီး သာဆောငျထားလိုကျပါ ။ကနျြးမာသောခွတေောကျမြားကိုပိုငျဆိုငျစလေိုသော စိတျစတေနာမြားစှာနဲ့…!
ခုလို မိုးတွင်းကာလ ရောက်ပီဆိုရင် တော့ …
ခြေမခြေသည်းတွေကြားထဲ သဲဝင် ရွံရေဝင် နဲ့ ပိုးဝင်ပါပီ။
နီရဲ ရောင်ကိုင်းညို ပုပ်ပီး အထိမခံနိုင်လောက်အောင်နာကျင်ပါတော့မယ်။
တစ်ချိူ့ ခြေတောက်တွေဆို အနံ့ ဆိုးတွေတောင်ထွက်ပါတယ်။
မိုးအေးလေးနဲ့ နေလို့ ကောင်းပေမဲ့ ခြေဝဲရေဝဲစားခြင်းဒဏ်ကို ခံရတာ အတော့်ကို နေရခက်ပါတယ်။ဒီလို ဝေဒနာတွေ ဒဏ်က ကင်းဝေးဖို့ဗဟုသုတ အနေနဲ့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဒီလိမ်းဆေးတောင့်လေး ထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ လုံးဝကိုသက်သာပျောက်ကင်းသွားမှာပါ ။ ခြေစွယ် လက်စွယ်ငုတ်တဲ့ အခါ ထည့်ပေးကြည့် ပါ …တကယ့်ကို ကောင်းပါတယ်။
ဝယ်ပီး သာဆောင်ထားလိုက်ပါ ။ကျန်းမာသောခြေတောက်များကိုပိုင်ဆိုင်စေလိုသော စိတ်စေတနာများစွာနဲ့ …!
ပုံတှအေားလုံးကိုသခြောကွညျ့ပွီးမှ မကျြလုံးထဲမှာ အကွိုကျတှဆေုံ့း တံခါးပေါကျ၊ သငျလြှောကျသှားလိုတဲ့တံခါးတဈခုကိုရှေးခယျြကွညျ့လိုကျပါ ပွီးလငျြ
သငျအကွိုကျဆုံးတံခါးတဈခုကို ရှေးခယျြပါနံပါတျလေးမှတျထားပါ ပွီးလငျြဆိုငျရာအဟောကိုရှာဖတျကွညျ့ပါ
သငျဟာ ကိုယျပိုငျလှတျလပျမှုကို မွတျနိုးသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ တဈစုံတဈယောကျရဲ့ လှမျးမို့မှု၊ အမိနျ့ပေးစခေိုငျးမှုတှကေို မနှဈမွို့ဘဲ မိမိစိတျတိုငျးကြ ကိုယျယုံကွညျရာလမျးကို လြှောကျလှမျးလိုသူတဈယောကျဖွဈတယျ။
ကိစ်စတဈခုကို ကမနျးကတမျးလုပျကိုငျရခွငျးကို မနှဈခွိုကျဘဲ အခြိနျယူလုပျဆောငျတတျသူဖွဈတယျ စိတျစှမျးအားပိုငျရှငျတဈယောကျဖွဈပွီး အောငျမွငျမှုမြား ရရှိနမေညျ။
မိမိကိုယျကို ယုံကွညျမှုရှိပွီး၊ သူတဈပါး အပျေါ လှမျးမိုးနိုငျစှမျးရှိသူလညျးဖွဈသညျ လူအမြား ၏ ခဈြခငျလေးစားမှုကို ခံရတတျပွီး တဈခါတရံ ခေါငျးမာခွငျး၊ အတ်တကွိင်ျးခွငျးတှကေ သငျ့ကိုအဟနျ့အတား ဖွဈစတေတျသညျ
အမြိုးသမီး၊ အကွီးအကဲမြားရဲ့ ကူညီဖေးမခွငျး ခံရတတျသညျ ငှကေံကောငျးနသေညျ ကံကောငျးခွငျး ရာခိုငျနှုနျး ၉၅ % ထိရှိသညျ ။
တဈကိုယျတျောသမားတို့ ရှေးခယျြရာထှကျပေါကျတဈခုဖွဈပါတယျ ပွဿနာတဈခုခု ၊ လုပျငနျးတဈခုခုရှိရငျ အမြားနဲ့ပူးပေါငျးဖို့ထကျ တဈယောကျထဲသီးသနျ့လုပျကိုငျဆောငျရှကျခငျြသူတဈယောကျ ဖွဈတယျ။
အမြားနဲ့မတူတဲ့ အမွငျ၊အတှေးအချေါတှရှေိတယျ မြားသောအားဖွငျ့တော့ အထီးကနျြ တဈကိုယျရညျသမားတှဖွေဈကွတယျ။
စိတျခံစားမှုမြား မြားပွီး အရာရာကို စိတျခံစားခကျြအတိုငျး လုပျကိုငျဆောငျ ရှကျနတေတျသညျ။
ရငျဆိုငျနရေသော ကိစ်စရပျမြားသညျ ရှဆေ့ကျမရ၊ နောကျပွနျလှညျ့မရတဲ့ ဖွဈတညျမှုတှကွေားမှာ လှုပျလမွေုပျလမေဖွဈရလအေောငျ အခြိနျတဈခုထိ စောငျ့သငျ့သညျ ။
မကောငျးကွံသူမြား အနားရှိနတေတျပွီး၊ အမှားစောငျ့နသေူမြားလညျး အသငျ့ရှိနတေတျသညျ အာမခံခွငျး မပွုသငျ့ဘဲ၊သှားသတိ လာသတိ ရှိသငျ့သညျ ငှကေံကောငျးခွငျး ရာခိုငျနှုနျး ၄၀ % ထိရှိသညျ ။
အရောငျအသှေးလှပတဲ့ လမျးတဈခုကိုရှေးခယျြလိုကျတာဖွဈလို့ တကျကွှမှု၊လနျးဆနျးမှု၊ လှပဝဆောမှုတို့သရုပျကို ဆောငျပါတယျ။
ဒီပုံကိုရှေးခယျြတဲ့သငျဟာ သငျယူလလေ့ာလိုစိတျကွီးသူဖွဈပွီး စူးစမျးလလေ့ာလိုစိတျရှိတာကွောငျ့ အမေးထူသူ၊ စကားမြားတတျသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။
အကောငျးဆုံးတှကေိုသာ ရရှိပိုငျဆိုငျနပွေီး ရဲရငျ့ခွငျး၊ ထကျမွတျခွငျး၊ နာမညျဂုဏျ သတငျး ကြျောကွားခွငျးမြားရှိနမေညျ မတ်ေတာကရုဏာစိတျကွိင်ျးလှနျးပွီး အားလုံးကို ကူညီ တတျသူ၊ ခဈြခငျ တတျသူဖွဈသညျ။
အရောငျးဝယျလုပျငနျးမြား အကြိုးပေးနသေညျ့ အခြိနျ ကာလ ဖွဈပွီး အလှအပနှငျ့ဆိုငျသော ကုနျပစ်စညျးမြား ပိုပွီး အရောငျးသှကျနမေညျ။
သတငျးကောငျးမြားရှိနတေတျပွီး ကောငျးမှနျတဲ့ သားသမီးရတနာရတတျသညျ။ ငှေ ကံကောငျးနပွေိင်ျး ငှဝေငျမညျ ကံကောငျးခွငျး ရာခိုငျနှုနျး ၉၅ % ထိရှိသညျ ။
ဘဝဆိုတဲ့ခရီးမှာ အမွဲရပျတနျ့မနတေတျဘဲ ရှကေို့ပဲဆကျနမေယျဆိုတဲ့ လူစားမြိုးတှဖွေဈပါတယျ သို့ပမေဲ့ တခါတရံမှာ ဘယျလမျးလြှောကျလို့ ဘယျလိုရှဆေ့ကျရမယျမသိ လမျးပြောကျနတေတျပါတယျ။
တခါတလမှောလညျး အမှားခဏခဏလုပျမိတတျလို့ စညျးစံနဈမရှိဘူး၊ တှေးချေါတတျမှုမရှိဘူးလို့ထငျရပမေယျ့ ဒါဟာသငျ့ရဲ့ပငျကိုယျစတိုငျကို ဖွဈနလေို့ပါပဲ။
ရငျဆိုငျယှဉျပွိုငျမညျ့သူမြိုးဖွဈနမေညျ ကွိင်ျးလေးသော တာဝနျမြားကို ဦးဆောငျနရေတတျပွီး ကိုယျရောစိတျပါ ပငျပနျးနမေညျ။
ယုံကွညျခကျြဖွငျ့ ရှဆေ့ကျသူဖွဈပွိင်ျး တိုကျပှဲတိုငျးကို ခကျ ခကျခဲခဲနှငျ့ အောငျမွငျမညျ့သူဖွဈသညျ ရှေးခယျြရခကျအောငျ အခှငျ့အရေးမြား ပွိုငျတူရလာ တတျပွိီး ရလာသညျမြားကို လကျမလှတျခငျြသူဖွဈသညျ။
ရနျရှိနတေတျပွိင်ျး အရာရာကို သတိ ဖွငျ့သာ လုပျကိုငျဆောငျရှကျသငျ့သညျ စိတျအနှောကျအယှကျဖွဈပွီးမှသာ ငှဝေငျတတျ သညျ ကံကောငျးခွငျး ရာခိုငျနှုနျး ၆အ % ထိရှိသညျ ။
သိမျမှမှေု့၊ ငွိမျးအေးမှု စတဲ့ပုံရိပျတှကေို ဆောငျထားတဲ့လမျးတဈခုဖွဈတယျ။ အေးအေးဆေးဆေးနတေတျပွီး ဘဝကို လှယျကူတဲ့လမျးမြိုးနဲ့ပဲ ဖွတျသနျးလိုသူဖွဈတယျ။
မိသားစု၊ မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှကေို ကူညီထောကျပံ့တတျသူတဈယောကျဖွဈတယျ။
အရာရာကို အကောငျးမွငျတတျသူဖွဈပွီးစိတျသဘော ထား ပွညျ့ဝသူမြိုးဖွဈသညျ တညျတညျငွိမျငွိမျ အေးအေးခမျြးခမျြး ဖွငျ့သာ ဘဝကို လြှောကျလှမျးလိုသူဖွဈပွိင်ျး ကူညီတတျသူမြိုးဖွဈသညျ။
ခဈြတတျသူ၊ တှယျတာစိတျမြားတတျသူဖွဈပွိင်ျး အထီးကနျြ ဆနျဆနျနတေတျသူလညျးဖွဈသညျ။အလှယျ တကူ ယုံကွညျတတျပွိင်ျး၊ အလှယျတကူလညျး နားလညျပေးတတျသညျ။
ပညာရေးကံကောငျးနပွေီး လုပျငနျးသဈအတှကျ ခရီးသှားရတတျ သညျ ကောငျးမှနျတဲ့ အခှငျ့လမျးမြား ရလာတတျပွီး ငှဝေငျမညျ ။
ကံကောငျးခွငျး ရာခိုငျနှုနျး ၈၀ % ထိရှိသညျ
6 ငွိမျးအေးခွငျး တံခါးပေါကျ
တဈယောကျနရေခွငျးကိုမှ နှဈသကျပါတယျဆိုတဲ့ လူတဈယောကျဖွဈတယျ အခြိနျတျောတျောမြားမြားမှာလညျး တဈယောကျထဲပဲနလေရှေိ့တယျ။
လာကကွီးရဲ့ အကွောငျးအရာတှကေိုလညျး စဉျးစားတှေးချေါနတေတျသေးတယျ လူမြား၊ လူရှုပျတဲ့အရပျဒသေတှကေို သဘောကလြမေ့ရှိဘူး။
ဒါပမေဲ့လညျး တကယျ့ကို ခငျမငျရတဲ့လူတခြို့ကိုတော့ သာမနျလူတှထေကျကို ပိုခငျတှယျနတေတျပါတယျ အကောငျးဆုံးသော အရာ မြားကို လကျဝယျပိုငျပိုငျ ရလာစနေိုငျသညျ။
အိုးသဈ၊ အိမျသဈ၊နရော ဌာနသဈမြားသို့ ပွောငျးရှရေ့တတျပွီး ရာထူးတိုး တတျသညျ လူမြိုး ခွား မိတျဆှမြေားနှငျ့တှဆေုံ့ရတတျပွီး အခှငျ့ရေးကောငျးမြား ရလာ မညျ။
လကျထပျမင်ျဂလာပှဲ ၊ အလှူမင်ျဂလာပှဲမြားသို့ တကျရောကျရ တတျသညျ ပွညျတှငျး၊ ပွညျပ ခရီးမြား အဆငျပွပွေသှေားရတတျသညျ။
အကွိင်ျးအကဲ၊ ဆှမြေိူးမြား၏ ကူညီဖေးမခွငျး ခံရ တတျပွီး အဝေးမှ လကျဆောငျမြားရတတျသညျ အခဈြရေးကံ ကောငျးနမေညျ ငှကေံကောငျးနပွေီး ရာခိုငျနှုနျး ၉၅ % ထိရှိသညျ ။
ပုံတွေအားလုံးကိုသေချာကြည့်ပြီးမှ မျက်လုံးထဲမှာ အကြိုက်တွေ့ဆုံး တံခါးပေါက်၊ သင်လျှောက်သွားလိုတဲ့တံခါးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ကြည့်လိုက်ပါ ပြီးလျင်
သင်အကြိုက်ဆုံးတံခါးတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါနံပါတ်လေးမှတ်ထားပါ ပြီးလျင်ဆိုင်ရာအဟောကိုရှာဖတ်ကြည့်ပါ
သင်ဟာ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ လွှမ်းမို့မှု၊ အမိန့်ပေးစေခိုင်းမှုတွေကို မနှစ်မြို့ဘဲ မိမိစိတ်တိုင်းကျ ကိုယ်ယုံကြည်ရာလမ်းကို လျှောက်လှမ်းလိုသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။
ကိစ္စတစ်ခုကို ကမန်းကတမ်းလုပ်ကိုင်ရခြင်းကို မနှစ်ခြိုက်ဘဲ အချိန်ယူလုပ်ဆောင်တတ်သူဖြစ်တယ် စိတ်စွမ်းအားပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုများ ရရှိနေမည်။
မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိပြီး၊ သူတစ်ပါး အပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိသူလည်းဖြစ်သည် လူအများ ၏ ချစ်ခင်လေးစားမှုကို ခံရတတ်ပြီး တစ်ခါတရံ ခေါင်းမာခြင်း၊ အတ္တကြိင်္းခြင်းတွေက သင့်ကိုအဟန့်အတား ဖြစ်စေတတ်သည်
အမျိုးသမီး၊ အကြီးအကဲများရဲ့ ကူညီဖေးမခြင်း ခံရတတ်သည် ငွေကံကောင်းနေသည် ကံကောင်းခြင်း ရာခိုင်နှုန်း ၉၅ % ထိရှိသည် ။
တစ်ကိုယ်တော်သမားတို့ ရွေးချယ်ရာထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ပြဿနာတစ်ခုခု ၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုခုရှိရင် အများနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ထက် တစ်ယောက်ထဲသီးသန့်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ချင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။
အများနဲ့မတူတဲ့ အမြင်၊အတွေးအခေါ်တွေရှိတယ် များသောအားဖြင့်တော့ အထီးကျန် တစ်ကိုယ်ရည်သမားတွေဖြစ်ကြတယ်။
စိတ်ခံစားမှုများ များပြီး အရာရာကို စိတ်ခံစားချက်အတိုင်း လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်နေတတ်သည်။
ရင်ဆိုင်နေရသော ကိစ္စရပ်များသည် ရှေ့ဆက်မရ၊ နောက်ပြန်လှည့်မရတဲ့ ဖြစ်တည်မှုတွေကြားမှာ လှုပ်လေမြုပ်လေမဖြစ်ရလေအောင် အချိန်တစ်ခုထိ စောင့်သင့်သည် ။
မကောင်းကြံသူများ အနားရှိနေတတ်ပြီး၊ အမှားစောင့်နေသူများလည်း အသင့်ရှိနေတတ်သည် အာမခံခြင်း မပြုသင့်ဘဲ၊သွားသတိ လာသတိ ရှိသင့်သည် ငွေကံကောင်းခြင်း ရာခိုင်နှုန်း ၄၀ % ထိရှိသည် ။
အရောင်အသွေးလှပတဲ့ လမ်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်လို့ တက်ကြွမှု၊လန်းဆန်းမှု၊ လှပဝေဆာမှုတို့သရုပ်ကို ဆောင်ပါတယ်။
ဒီပုံကိုရွေးချယ်တဲ့သင်ဟာ သင်ယူလေ့လာလိုစိတ်ကြီးသူဖြစ်ပြီး စူးစမ်းလေ့လာလိုစိတ်ရှိတာကြောင့် အမေးထူသူ၊ စကားများတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးတွေကိုသာ ရရှိပိုင်ဆိုင်နေပြီး ရဲရင့်ခြင်း၊ ထက်မြတ်ခြင်း၊ နာမည်ဂုဏ် သတင်း ကျော်ကြားခြင်းများရှိနေမည် မေတ္တာကရုဏာစိတ်ကြိင်္းလွန်းပြီး အားလုံးကို ကူညီ တတ်သူ၊ ချစ်ခင် တတ်သူဖြစ်သည်။
အရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းများ အကျိုးပေးနေသည့် အချိန် ကာလ ဖြစ်ပြီး အလှအပနှင့်ဆိုင်သော ကုန်ပစ္စည်းများ ပိုပြီး အရောင်းသွက်နေမည်။
သတင်းကောင်းများရှိနေတတ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ သားသမီးရတနာရတတ်သည်။ ငွေ ကံကောင်းနေပြိင်္း ငွေဝင်မည် ကံကောင်းခြင်း ရာခိုင်နှုန်း ၉၅ % ထိရှိသည် ။
ဘဝဆိုတဲ့ခရီးမှာ အမြဲရပ်တန့်မနေတတ်ဘဲ ရှေ့ကိုပဲဆက်နေမယ်ဆိုတဲ့ လူစားမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ် သို့ပေမဲ့ တခါတရံမှာ ဘယ်လမ်းလျှောက်လို့ ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမယ်မသိ လမ်းပျောက်နေတတ်ပါတယ်။
တခါတလေမှာလည်း အမှားခဏခဏလုပ်မိတတ်လို့ စည်းစံနစ်မရှိဘူး၊ တွေးခေါ်တတ်မှုမရှိဘူးလို့ထင်ရပေမယ့် ဒါဟာသင့်ရဲ့ပင်ကိုယ်စတိုင်ကို ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ရင်ဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်မည့်သူမျိုးဖြစ်နေမည် ကြိင်္းလေးသော တာဝန်များကို ဦးဆောင်နေရတတ်ပြီး ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ပင်ပန်းနေမည်။
ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ရှေ့ဆက်သူဖြစ်ပြိင်္း တိုက်ပွဲတိုင်းကို ခက် ခက်ခဲခဲနှင့် အောင်မြင်မည့်သူဖြစ်သည် ရွေးချယ်ရခက်အောင် အခွင့်အရေးများ ပြိုင်တူရလာ တတ်ပြိီး ရလာသည်များကို လက်မလွှတ်ချင်သူဖြစ်သည်။
ရန်ရှိနေတတ်ပြိင်္း အရာရာကို သတိ ဖြင့်သာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သင့်သည် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီးမှသာ ငွေဝင်တတ် သည် ကံကောင်းခြင်း ရာခိုင်နှုန်း ၆အ % ထိရှိသည် ။
သိမ်မွေ့မှု၊ ငြိမ်းအေးမှု စတဲ့ပုံရိပ်တွေကို ဆောင်ထားတဲ့လမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ပြီး ဘဝကို လွယ်ကူတဲ့လမ်းမျိုးနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းလိုသူဖြစ်တယ်။
မိသားစု၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို ကူညီထောက်ပံ့တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။
အရာရာကို အကောင်းမြင်တတ်သူဖြစ်ပြီးစိတ်သဘော ထား ပြည့်ဝသူမျိုးဖြစ်သည် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြင့်သာ ဘဝကို လျှောက်လှမ်းလိုသူဖြစ်ပြိင်္း ကူညီတတ်သူမျိုးဖြစ်သည်။
ချစ်တတ်သူ၊ တွယ်တာစိတ်များတတ်သူဖြစ်ပြိင်္း အထီးကျန် ဆန်ဆန်နေတတ်သူလည်းဖြစ်သည်။အလွယ် တကူ ယုံကြည်တတ်ပြိင်္း၊ အလွယ်တကူလည်း နားလည်ပေးတတ်သည်။
ပညာရေးကံကောင်းနေပြီး လုပ်ငန်းသစ်အတွက် ခရီးသွားရတတ် သည် ကောင်းမွန်တဲ့ အခွင့်လမ်းများ ရလာတတ်ပြီး ငွေဝင်မည် ။
ကံကောင်းခြင်း ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ % ထိရှိသည်
6 ငြိမ်းအေးခြင်း တံခါးပေါက်
တစ်ယောက်နေရခြင်းကိုမှ နှစ်သက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် အချိန်တော်တော်များများမှာလည်း တစ်ယောက်ထဲပဲနေလေ့ရှိတယ်။
လာကကြီးရဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း စဉ်းစားတွေးခေါ်နေတတ်သေးတယ် လူများ၊ လူရှုပ်တဲ့အရပ်ဒေသတွေကို သဘောကျလေ့မရှိဘူး။
ဒါပေမဲ့လည်း တကယ့်ကို ခင်မင်ရတဲ့လူတချို့ကိုတော့ သာမန်လူတွေထက်ကို ပိုခင်တွယ်နေတတ်ပါတယ် အကောင်းဆုံးသော အရာ များကို လက်ဝယ်ပိုင်ပိုင် ရလာစေနိုင်သည်။
အိုးသစ်၊ အိမ်သစ်၊နေရာ ဌာနသစ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ရတတ်ပြီး ရာထူးတိုး တတ်သည် လူမျိုး ခြား မိတ်ဆွေများနှင့်တွေ့ဆုံရတတ်ပြီး အခွင့်ရေးကောင်းများ ရလာ မည်။
လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲ ၊ အလှူမင်္ဂလာပွဲများသို့ တက်ရောက်ရ တတ်သည် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးများ အဆင်ပြေပြေသွားရတတ်သည်။
အကြိင်္းအကဲ၊ ဆွေမျိူးများ၏ ကူညီဖေးမခြင်း ခံရ တတ်ပြီး အဝေးမှ လက်ဆောင်များရတတ်သည် အချစ်ရေးကံ ကောင်းနေမည် ငွေကံကောင်းနေပြီး ရာခိုင်နှုန်း ၉၅ % ထိရှိသည် ။
ဆံပငျထဲက အဆိပျတှကေို ဖယျရှားနိုငျတဲ့ မီးသှေးခဲမှုနျ့
မီးသှေးမှုနျ့ရဲ့ မထငျထားလောကျအောငျ အံ့မခနျးအသုံးဝငျပုံ (၅) ခု
မီးသှေးမှုနျ့ဟာ ခန်ဓာကိုယျအတှကျအရမျးကို အသုံးဝငျတဲ့ သဘာဝဆေးစှမျးကောငျးတဈလကျဖွဈပါတယျ။ မီးသှေးမှုနျ့ကို ဘယျလိုနရောတှမှော ထိရောကျစှာ အသုံးပွုနိုငျလဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျပါနျော။
(၁) မီးသှေးမှုနျ့နဲ့သှားတိုကျခွငျးဖွငျ့ ခြိုးတှေ၊ ညဈနတောတှေ၊ သှားဝါတာတှကေို ပြောကျကငျးစပွေီး ဖွူဖှေးနတေဲ့သှားလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျစပေါတယျ။
(၂) မီးသှေးမှုနျ့ကို ရအေနညျးငယျရောပွီး မကျြနှာကိုလိမျးလိုကျပါ။ ခွောကျသှားတဲ့အထိထားပွီး ရဆေေးပေးခွငျးဖွငျ့ အဆိပျအတောကျကငျးပွီး ဝငျးပဖွူစငျတဲ့မကျြနှာလေးကို ရရှိမှာပါ။
(၃) အကောငျတဈခုခုကိုကျခံရတဲ့အခါ မီးသှေးမှုနျ့ကို အုနျးဆီရောပွီး အကိုကျခံရတဲ့နရောကို လိမျးပေးခွငျးဖွငျ့ သကျသာပြောကျကငျးစနေိုငျပါတယျ။
(၄) မီးသှေးမှုနျ့ဟာ အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျရှားပေးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ တဈရကျကို မီးသှေးမှုနျ့အနညျးငယျ စားသုံးပေးခွငျးဖွငျ့ ခန်ဓာကိုယျထဲကအဆိပျအတောကျတှကေို သနျ့စငျပေးပွီး အသညျးနဲ့ကြောကျကပျကို သနျ့ရှငျးစပေါတယျ။
(၅) မီးသှေးမှုနျ့ကို သုံးနကေခြေါငျးလြှျောရညျထဲ ထညျ့လြှျောပေးခွငျးဖွငျ့ ဆံပငျထဲက အဆိပျတှအေားလုံးကို ထုတျပေးပွီး သနျ့စငျစပေါတယျ။ ဆံပငျကိုနကျမှောငျသနျစှမျးစနေိုငျပါတယျ။
မီးသွေးမှုန့်ရဲ့ မထင်ထားလောက်အောင် အံ့မခန်းအသုံးဝင်ပုံ (၅) ခု
မီးသွေးမှုန့်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရမ်းကို အသုံးဝင်တဲ့ သဘာဝဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ မီးသွေးမှုန့်ကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်လဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါနော်။
(၁) မီးသွေးမှုန့်နဲ့သွားတိုက်ခြင်းဖြင့် ချိုးတွေ၊ ညစ်နေတာတွေ၊ သွားဝါတာတွေကို ပျောက်ကင်းစေပြီး ဖြူဖွေးနေတဲ့သွားလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်စေပါတယ်။
(၂) မီးသွေးမှုန့်ကို ရေအနည်းငယ်ရောပြီး မျက်နှာကိုလိမ်းလိုက်ပါ။ ခြောက်သွားတဲ့အထိထားပြီး ရေဆေးပေးခြင်းဖြင့် အဆိပ်အတောက်ကင်းပြီး ဝင်းပဖြူစင်တဲ့မျက်နှာလေးကို ရရှိမှာပါ။
(၃) အကောင်တစ်ခုခုကိုက်ခံရတဲ့အခါ မီးသွေးမှုန့်ကို အုန်းဆီရောပြီး အကိုက်ခံရတဲ့နေရာကို လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
(၄) မီးသွေးမှုန့်ဟာ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ တစ်ရက်ကို မီးသွေးမှုန့်အနည်းငယ် စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအဆိပ်အတောက်တွေကို သန့်စင်ပေးပြီး အသည်းနဲ့ကျောက်ကပ်ကို သန့်ရှင်းစေပါတယ်။
(၅) မီးသွေးမှုန့်ကို သုံးနေကျခေါင်းလျှော်ရည်ထဲ ထည့်လျှော်ပေးခြင်းဖြင့် ဆံပင်ထဲက အဆိပ်တွေအားလုံးကို ထုတ်ပေးပြီး သန့်စင်စေပါတယ်။ ဆံပင်ကိုနက်မှောင်သန်စွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။
ညနေ ၃နာရီခနျ့က ဘဏျကို ငှလောထုတျယူသူတဈဦးက KBZ ဘဏျတှငျ ငှရေတှေကျ စဈဆေးလိုကျသောအခါ သိနျး ၅၀၀၀ နီးပါး အလှဲသုံးစားလုပျထားခွငျးခံရ
တဈသောငျးအုပျတှငျ တဈထောငျတနျမြား အစားထိုးထညျ့ထားပွီး သိနျး ၅၀၀၀ နီးပါး အလှဲသုံးစားလုပျသညျ့ ဘဏျဝနျထမျးကိုဖမျးဆီး
ဖွဈစဉျကတော့ မေ ၁၉ ရကျ ညနေ ၃နာရီခနျ့က ဘဏျကို ငှလောထုတျယူသူတဈဦးက ငှရေတှေကျစဈဆေးတဲ့အခြိနျ ကပျြတဈသောငျးအုပျတဈအုပျမှာ တဈသောငျးကပျြတနျနှဈရှကျကို အပျေါနဲ့ အောကျ တဈရှကျစီ ညှပျထားပွီး ကနျြတဲ့(၉၈)ရှကျကို တဈထောငျကပျြတနျတှနေဲ့ အစားထိုးထညျ့ထားတာတှရှေိ့ရလို့ ဘဏျတာဝနျရှိသူအား အကွောငျးကွားခဲ့လို့ သိရှိခဲ့ရတာပါ။
ပွဈမူကြူးလှနျသူကို ဖျောထုတျဖမျးဆီးရမိတဲ့ အခါမှာ လောငျးကစားလုပျမိခဲ့တာလို့ ဖွောငျ့ခကျြပေးကွောငျး ရှဘေိုမွို့မရဲစခနျးထံမှ သိရပါတယျ။
ရှဘေိုမွို့မရဲစခနျးက အဲဒီဘဏျဝနျထမျးကို (ပ)၃၁၈/၂၀၂၀၊ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ-၄၀၈ နဲ့ (ပ)၃၁၉/၂၀၂၀၊ ရာဇသတျကွီး ဥပဒပေုဒျမ- ၃၀၉ တို့နဲ့ အမှုဖှငျ့ထားပွီး တရားရုံးခြုပျရီမနျရယူကာ ရှဘေိုအကဉျြးထောငျသို့ ပို့ဆောငျခဲ့ပါတယျ။
ဖြစ်စဉ်ကတော့ မေ ၁၉ ရက် ညနေ ၃နာရီခန့်က ဘဏ်ကို ငွေလာထုတ်ယူသူတစ်ဦးက ငွေရေတွက်စစ်ဆေးတဲ့အချိန် ကျပ်တစ်သောင်းအုပ်တစ်အုပ်မှာ တစ်သောင်းကျပ်တန်နှစ်ရွက်ကို အပေါ်နဲ့ အောက် တစ်ရွက်စီ ညှပ်ထားပြီး ကျန်တဲ့(၉၈)ရွက်ကို တစ်ထောင်ကျပ်တန်တွေနဲ့ အစားထိုးထည့်ထားတာတွေ့ရှိရလို့ ဘဏ်တာဝန်ရှိသူအား အကြောင်းကြားခဲ့လို့ သိရှိခဲ့ရတာပါ။
ပြစ်မူကျူးလွန်သူကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ အခါမှာ လောင်းကစားလုပ်မိခဲ့တာလို့ ဖြောင့်ချက်ပေးကြောင်း ရွှေဘိုမြို့မရဲစခန်းထံမှ သိရပါတယ်။
ရွှေဘိုမြို့မရဲစခန်းက အဲဒီဘဏ်ဝန်ထမ်းကို (ပ)၃၁၈/၂၀၂၀၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၄၀၈ နဲ့ (ပ)၃၁၉/၂၀၂၀၊ ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ- ၃၀၉ တို့နဲ့ အမှုဖွင့်ထားပြီး တရားရုံးချုပ်ရီမန်ရယူကာ ရွှေဘိုအကျဉ်းထောင်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒညငျးသီးကို မနနေိုငျလို့ စားတော့မယျဆိုရငျ….(အပွညျ့အစုံဖတျရနျပုံကိုနှိပျပါ)
နာနတျသီးနဲ့ ပွုတျတဲ့ ဒညငျးသီးပွုတျကိုစားပါ ။နာနတျသီးအခြို အခဉျြ တှကေ ဒညငျးသီးအရသာကို ပိုမိုကောငျးစပွေီး
ဘေးထှကျဆိုးကြိုးကိုလညျး သကျသာစပေါတယျ ။ထနျးညှကျနဲနဲ ထဲ့ပွုတျ ပိုကောငျးပါတယျ ။
တညငျးသီးစားပွီး ရှောကျရှကျ စားပါ ။ ရှောကျရှကျက ကြောကျကပျအတှကျပါ ။ဆားနဲ့ပွုတျ တာတော့ အကောငျးဆုံးပါ
ဒညငျးသီး အဆိပျက ဆားရညျ ထဲမှာ ပြျောဝငျ တာ သိပ်ပံနညျးကြ စမျးသပျ ထား တာ ပါ ဆားနဲ့ အရငျပွုတျ ပွီး ရသှေနျ ပွီးမှ နာနတျသီးနဲ့ ပွနျပွုတျပါ ။
ဒညငျးသီးစားပွီးရငျ မာလကာရှကျကို ဝါးစားပွီး ပလုတျကငျြးလိုကျ ပါးစပျမနံတော့ဘူး
ကြောကျကပျမထိအောငျ ရမြေားမြားသောကျရမယျ ။ထနျးညကျတဈလုံးလောကျ စားရငျ ပါးစပျမနံဘူး လကျတှပေါ
နာနတ်သီးနဲ့ ပြုတ်တဲ့ ဒညင်းသီးပြုတ်ကိုစားပါ ။နာနတ်သီးအချို အချဉ် တွေက ဒညင်းသီးအရသာကို ပိုမိုကောင်းစေပြီး
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုလည်း သက်သာစေပါတယ် ။ထန်းညှက်နဲနဲ ထဲ့ပြုတ် ပိုကောင်းပါတယ် ။
တညင်းသီးစားပြီး ရှောက်ရွက် စားပါ ။ ရှောက်ရွက်က ကျောက်ကပ်အတွက်ပါ ။ဆားနဲ့ပြုတ် တာတော့ အကောင်းဆုံးပါ
ဒညင်းသီး အဆိပ်က ဆားရည် ထဲမှာ ပျော်ဝင် တာ သိပ္ပံနည်းကျ စမ်းသပ် ထား တာ ပါ ဆားနဲ့ အရင်ပြုတ် ပြီး ရေသွန် ပြီးမှ နာနတ်သီးနဲ့ ပြန်ပြုတ်ပါ ။
ဒညင်းသီးစားပြီးရင် မာလကာရွက်ကို ဝါးစားပြီး ပလုတ်ကျင်းလိုက် ပါးစပ်မနံတော့ဘူး
ကျောက်ကပ်မထိအောင် ရေများများသောက်ရမယ် ။ထန်းညက်တစ်လုံးလောက် စားရင် ပါးစပ်မနံဘူး လက်တွေပါ
အသကျအားဖွငျ့ ၆နှဈ၊ ၁၃နှဈ၊ ၂၀နှဈ၊ ၂၇နှဈ၊ ၃၄နှဈ၊ ၄၁နှဈ၊ ၄၈နှဈ၊၅၅နှဈ၊ ၆၂နှဈ၊ ၆၉နှဈ၊ ၇၆နှဈ၊ ၈၃နှဈ၊ ၉၀နှဈ စသော အသကျပိုငျးမြားတှငျ ကံဇာတာ ညှိးနှမျးလှယျတတျပါသညျ။
သငျ့ကားကို လမျးဘေးထိုးရပျလိုကျသငျ့ပွီဟု ပွောပွနသေော Heat Indicatorအကွောငျး
ကားကိုစတငျအသုံးပွုဖို့ အငျဂငျြကိုနိုးလိုကျပွီဆိုတာနဲ့ဒကျဘုတျထဲကSignတှအေကုနျနီးပါးကအငျဂငျြနိုးပွီဆိုတာနဲ့ပွနျပြောကျသှားပါတယျ။မပြောကျပဲကနျြတာကတော့Gear Positionပွတဲ့indicatorနှငျ့အပွာရောငျလဲ့လဲ့Heat indicatorလေးပါပဲ။
ကား Heat တကျရတဲ့ ပွဿနာတျောတျောမြားမြားကလညျး အခွခေံအားဖွငျ့တော့ Coolant leakage ကနဖွေဈတယျ ။ ရပေိုကျတှကှေဲတာ ၊ ရလေညျအုံတှေ ၊ ရဇေလုပျချေါတာတှေ ပေါကျတာ ကှဲတာ အကျတာ ၊ ပနျကာဘှတျခြောငျပွီး လိုအပျတဲ့ လညျနှူနျးမရတာ တှကေနေ ရတေိုငျကီထဲက အငျဂငျြအအေးပေးတဲ့ စနဈပကျြယိုယှငျးပွီး Heat တကျ စကျရပျအဖွဈမြားပါတယျ ။
← Previous Page1 … Page405 Page406 Page407 … Page413 Next →